Ajouter un commentaire - Ny farara sy ny fararano - Ambohibary, vohitra soa !
Création : 20/12/2008 à 12:40 Mise à jour : 27/03/2017 à 08:31
Retour au blog de Ambohibary
Ny farara sy ny fararano
An'isan'ny mampiavaka ny fararano any Ambohibary ny fitsofan'ny ankizy farara. Ny farara moa dia vita amin'ny tahombary ka ny vodiny ambany hatreo amin'ny tonony no ampiasaina. Mirefy eo amin'ny 5 sm ka hatreo amin'ny 10 sm ny farara. Atao am-bava ary tsofina avy hatrany ny farara, tsy mila tendrena na fihetsika hafa fa tsofina indray mandeha dia manome feo mozika miredona. Azo atao ny manao ambava farara roa na telo indray miaraka, manome feo miavaka nohon'ny iray. Misy fotoanany anefa ny fitsofana farara. Tsy azo atao noho izany ny mitsoka farara raha tsy efa miha maro ireo manao vary, ary tena fadiana ny mitsoka izany raha mbola eo am-piondrehana ny vary fa toa hoe manota fady ary mety hitondra loza izany, toy ny firotsahan'ny avandra ka mety hamely ny vary eny an-tsaha.
Dia raikitra ny fampitaha : mifaninana izay manana farara tsara feo sy miredona ny ankizy. Kilalao mora atao sy maha sodriana. Fifaliana hatrany ny endrika hita misoritra eny amin'ny tavan'ireo ankizy fa fararano tokoa ny andro !
An'isan'ny mampiavaka ny fararano any Ambohibary ny fitsofan'ny ankizy farara. Ny farara moa dia vita amin'ny tahombary ka ny vodiny ambany hatreo amin'ny tonony no ampiasaina. Mirefy eo amin'ny 5 sm ka hatreo amin'ny 10 sm ny farara. Atao am-bava ary tsofina avy hatrany ny farara, tsy mila tendrena na fihetsika hafa fa tsofina indray mandeha dia manome feo mozika miredona. Azo atao ny manao ambava farara roa na telo indray miaraka, manome feo miavaka nohon'ny iray. Misy fotoanany...
farara, fararano, ambohibary, mijinja vary, vary
# Posté le samedi 05 mars 2016 01:46
Modifié le mercredi 09 mars 2016 02:58